Sida loo wajaho weevil on strawberries
Koraaya strawberries waxay u baahan tahay xoog badan iyo dulqaad. Laakiin strawberries sii kordhaya waa kala bar dagaalka. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in laga ilaaliyo cayayaanka badan (waxaana jira dad badan oo doonaya inay ku cunaan strawberries). Mid ka mid ah cayayaanka khatarta ah ee dila kara 50-80% wadarta guud ee dalaggu waa weevils. Calaamado muujinaya in duufaankaagu uu soo weeraray cadowgaan: muuqaalka godadka yar yar ee caleemaha cagaaran ee dhirta, hoos u dhac ku yimaada peduncles, qalajinta burooyinkeeda, sida haddii qof uu gooyay.
Sida loo daryeelo strawberries guga: talooyin ka soo bannaanka u khibrad leh
Strawberries waa mid ka mid ah nooca ugu jecel ee had iyo jeer looga baahan yahay miisaska. In aad ku hawlan tahay tarankeeda, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso qaar ka mid ah murugada dhirta xilliyeed, ka dibna nabdoonaanta duurka iyo wax-soosaarkooda waa la damaanad qaadayaa. Ma taqaanaa? Strawberry waa raaxo faa'iido leh. Waxaa ka kooban fitamiino C, E, P, salicylic, oxalic, folic acid, carotene, potassium, kalsiyum, floriin, birta, silicon, copper, magnesium, zinc, iodine, chromium.
Varyts ee samaynta sariiraha qumman ee for strawberries adiga kuu gaar ah
Haddii aad leedahay aag yar, waxaad dooneysaa inaad wax soo saartid wax badan oo badan, sariiro qoyan waa waxa aad u baahan tahay. Waxaa jira fursado badan oo loogu talagalay naqshadaha, qalabka iyo foomamka warshadahan. Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa sariiraha tooska ah ee isku-dhafan ee loogu talagalay strawberries. Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada sariiro qoyan ee beerta Faa'iidooyinka shakiga ah ee sariirahaan waxaa loo aaneyn karaa badbaadinta dhulalka dhulka: sariiraha beerta waxaa lagu sameyn karaa xayndaabka, derbiga ee dhaqaaleynta, beerta qaabka sariirta ubaxa, laftirka berriga ama veranda.
On lix acres oo dhul ah waa adag tahay in la koro dhammaan dhaqamada aan jeclaan lahaa. Si meel loo badbaadiyo, bannaanka ayaa si sii kordhaya u diyaargaroobaya beerashada toosan. Haddii aad tahay ninkii beerta hareerihiisa ah oo raba inuu barto sida loo isticmaalo ereyga "strawberries" gacmahaaga, qodobkan ayaa kaa caawin doona. Ahraam - muxuu yahay?
Bannaanka u khibrad leh waa hubaal in ay tahay lagama maarmaan in la sameeyo mulching strawberry. Thanks to this agro-codsigan, lakabka mulch xajistaa qoyaanka ee ciidda, iyo waa arrin aad u adag tahay haramaha si ay u jajabaan ilaa iftiinka, ciidda noqon nafaqo leh oo dabacsan. Noocyada strawberry waa qayb aad u muhiim ah ee kalkaalinta, la barbar dhigi karo beeritaanka habboon iyo waraabinta.
Sifooyinka qulqulaya strawberry "Malvina" ee goobtaada
Strawberry ayaa laga yaabaa in laga yaabo in miraha miraha ugu caansan ee sirqoollada guriga. Miraha iyada ayaa loo cusbooneysiiyey cusub, la qaboojiyey, loo isticmaalo diyaar garowga jiilaalka kala duwan (jams, ilaalin, wax soo saarka, iwm.). Doorashada saxda ah ee kala duwan ayaa bixin doona goosashada mug leh. Bannaanka u khibrad leh waxay ku taliyaan in ay fiiro gaar ah siiyaan noocyada kala duwan ee strawberry Malvina.
Noocyada strawberry "Kimberly" ayaa noqda mid sii caan u ah beeraleyda iyo beeraleyda, ugu horreyn sababtoo ah xilligii bislaanshaha hore, sababtoo ah waa miro cusub oo cusub oo ka muuqda miiskeena ka dib jiilaal dheer - ugu macquulsan, oo, sidaas darteed, ugu qaali ah. Qeexida Noocyada Kimberly Strawberry Noocyada kala duwan ee noocyada strawberry waa Nederland, iyo "waalidkeed" waa Chandler, noocyo aad u ballaaran oo adag, taas oo sidoo kale loo yaqaano cirqiga, iyo noocyada ugu yar ee la yaqaan waa Gorella.
Strawberry "Zenga Zengan": sharaxaadda iyo beerista
Kala duwanaanshahan waa mid ka mid ah caanaha ugu caansan dhulkeenna. Daryeel aan qabyo ahayn iyo dhadhanka aadka u fiican wuxuu isaga dhigay qof jecel oo ka mid ah dadka degaanka xagaaga. In dib-u-eegista maanta, waxaan eegaynaa sida cajiib leh Zenawi Zengana kala duwan ee strawberry waa. Qeexida noocyada kala duwan Noocyada waxaa loola jeedaa dhirta saacadaha gaaban.
Waad ku mahadsan tahay shaqada adag ee jilayaasha, noocyada dib-u-celinta ee strawberries ayaa hagaajiyay astaamaha, waxay u adkahay xaaladaha cimilada, iyo, ugu muhiimsan, in ay soo saaraan dhowr waxsoos ah xilli kasta. About mid ka mid ah noocyada kuwaas - strawberry "Fresco" u sheeg maqaalkan. Strawberry "Fresco": Tilmaamaha iyo Tilmaamaha Tani waxay ka kooban tahay duurka xooggan ilaa 30 cm oo dhaadheer, duurka waxay bixiyaan wax badan oo inflorescences ah oo si khaas ah midho u dhali.
Qodobbada beeraha "Chamora Turusi": beeritaanka iyo daryeelidda berry
Noocyo kala duwan oo strawberry mar walba soo jiidato beerta. Ka dib markii ay ka fekereyso beerashada noocaan oo kale, dad badan ayaa tagay dhowr nooc, kuwaas oo inta badan si ballaaran loo maqlo. Hubaal qof kastaa wuxuu maqlay "Chamora" line, iyo in this article waxaan arki doonaa nooca berry iyo waxa faa'iidooyinka marka ay koray dalka. Noocyada kala duwan Tilmaamku wuxuu iska leh noocyo sarraysa oo leh waqti dheer Bisaylkiisa.
Secrets of strawberries sii kordhaya strawberry: beeritaanka iyo daryeelidda berry ee beerta
Amppelnaya strawberry waa nooca gaarka ah ee berry, oo ay matalaan dhowr noocyo. Warshadu waxay kobcin kartaa oo waxay midho u noqon kartaa taageerada tooska ah ama hoos u dhacda. Amppelnaya berry waxaa loo isticmaalaa ma aha oo kaliya isticmaalka, laakiin sidoo kale sida qurxinta dabiiciga ah. Noocyada strawberry kufar Sida ka duwan noocyo kale, ma aha oo kaliya geedka laftiisa, laakiin sidoo kale antennae, blooms iyo dhirbaaxo miro at strawberry qalafsan, iyo isku mar.
Tarar strawberry Tsaritsa: sifooyinka faahfaahsan iyo sifooyinka beeraha kala duwan
Strawberry waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah midhaha ugu jecel badan oo dhan. Taasina waa sababta ay jadeecadu u joojin weydo oo ay keenaan noocyo cusub oo tayo sare leh. Strawberry "Tsaritsa" waa arrin aad u qurux badan oo xulasho Ruush ah. Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa strawberries (strawberries) "Tsarina", sharaxaadda noocyo kala duwan oo sawir leh, iyo sidoo kale sifooyinka beerashada.
Koraaya strawberries ka soo abuurka waa hawl suurta gal ah xitaa beerta qurxoon, waxaad u baahan tahay inaad ogaato qaar ka mid ah faahfaahinta geedi socodka. Faa'iidada ugu weyn ee habkaan ee beerashada waa ilaalinta sifooyinka varietal, iyo sidoo kale helitaanka tiro badan oo geedo ka soo berry dhowr ah. Noocyada ugu fiican Varietal kala duwan ee berry ayaa kuu ogolaanaya inaad dooran dalagga leh isku dhafka ugu wanaagsan ee sifooyinka: dhadhan, dhalid, iska caabin ah xaaladaha cimilada iyo cudurada.
Sidee loo bedelaa strawberries xilliga dayrta: talooyin iyo khiyaamo
Ka soo horjeeda caqiidada caanka ah, ka dib goosashada, oo leh bilawga xilliga dayrta, shaqada xagaaga kuma dhamaato. Muddadan, bannaanka u sugayaan shaqo badan oo ku saabsan goobta. Transplanting strawberries meel cusub waa mid ka mid ah kuwa. Sababta sababta cagaarshowga beerka Qalalaasaha berrigan waa in ka dib sii kordhaya hal dhagax sannadle ah dhowr sano, wax soo saarkoodu hoos u dhaco, iyo ka dib markii ay joojiso miraha oo dhan.
Strawberries iyo dhadhan fiican leh "Maxim": sifooyinka iyo xeerarka noocyada sii kordhaya
Noocyada kala duwan ee "strawberry" Maxim "waxaa lagu xareeyey xulashooyinka Nederland waxayna muddo dheer caan ka ahaayeen beerta. Tani ma ahan wax la yaab leh, maxaa yeelay waxay u fiican tahay goosashada guriga iyo iibinta, iyo daryeeshaa ma keento xitaa xitaa bannaanka u ah. Waxyaabaha kala duwan ee kala duwan The strawberry ee kala duwan tani waxay bilaabmaysaa in ay u bislaadaan bartamaha June iyo soo saaro dhalid joogto ah sare.
Sida loo quudiyo strawberries leh iodine
Strawberries waa miro yar oo jecel in koraa on sirqoollada badan oo badan. Dhaqanka ayaa si caadi ah u kora oo aan daryeel gaar ah leh, si kastaba ha ahaatee, si loo helo dhalidda sare iyo cudurrada dagaalka iyo cayayaanka ayaa weli lagu talinayaa in ay sameeyaan labiska. Tan iyo inta badan berrigan waxaa la koray on sirqo shakhsi si ay u isticmaalaan diyaarinta kiimikada ma jirto rabitaan ah.
Waa maxay noocyada strawberries ugu fiican ee ku habboon koritaanka xaafadaha
Gobalka dhexe ee Ruushka, jinsiyadu waxay soo saareen dalagyo si fiican ugu haboon beerista gobolka. Noocyada nooca berry ee gobolka Moscow waa la doortaa iyada oo loo eegayo shuruudaha muhiimka ah: Bisaylkiisa, dhalidda wanaagsan, xawaaraha bisil. Noocyada strawberries sii kordhaya ee xaafadaha Cagaarka cagaha iyo carfisku waa caan ujeeda xagaaga ee dadka badan, iyo maalin kasta beerta waxay u beddeshaa fasax, laakiin waxaad u baahan tahay inaad doorato nooca saxda ah ee berry si ay dalagga u noqdaan kibirka milkiilaha.
Koraaya strawberries curly: beeritaanka iyo daryeelidda for berry at dacha
Kareem, casiir leh, berry macaan, jecel carruurta iyo dadka waaweyn - strawberries. Ma fududa in la qiyaaso in qofna uusan jeclaan karin. Strawberry waa xusuusin xagaaga ah oo aad rabto inaad kordhiso. Ma jiraa strawberry kakan? Awoodda noocyo gaar ah ee strawberries remontant si ay u soo saaraan dalagga ma aha oo kaliya on baadiyaha ugu weyn, laakiin sidoo kale on rosettes yar - waxaa loo isticmaalaa by shirkadaha aan khasabka ah si loo kordhiyo iibka.
"Finnish" strawberries: sida loo koro strawberries iyadoo la isticmaalayo farsamada Finnishka
Koraaya strawberries waa waqti qaadashada. Mid ka mid ah wadamada ugu guulaha badan ee arrintani waa Finland. Waxay ku taallaa booska hogaanka u ah suuqyadan raaxadaas macaan, inkastoo cimilada adag ee waddankan waqooyiga ah. Kobcinta strawberries ee Finland waa mudnaanta wax soo saarka beeraha.